Dad ku geeriyooday Hindiya iyaga oo sawir iska qaadaya - BBC News Somali
Dad ku geeriyooday Hindiya iyaga oo sawir iska qaadaya
20 Nofembar 2017
Image caption Tareen jiiray dhalinyaro sawir iska qaadaysay
Mas'uuliyiinta gobolka Karnataka ayaa bilaabay olole ay dadka kaga wacyigalinayaan halista ka dhalan karta dhaqamada sawir iska qaadista meelaha qaar, xili dad badan ay u dhinteen falkan.
Sida ay ku waramayso wariyaha BBC-da Geeta Pandey oo ku sugan magaalada Bangalore, dhalinyarada oo ugu badan kuwa sawirada gala ayaa meelaha ay tagaan waxaa ka mid ah macbad ku yaala magaaladaas oo la dhisay sanadkii 1932-dii.
Mid ka mid ah sawirada ay iska qaadeen ayaa waxaa ka muuqda mid ka mid ah ardayda oo biyaha wabi meesha ku yaala kusii quusaya xili ay iyaga ku mashquulsanaayeen sawir iska qaadis.
Muddo saacad kadib ayay tabeen in uu qof ka maqanyahay, waxaana meydkiisa laga soo heley biyaha hoostooda.
Aqalka sare ee Hindiya oo ansixiyay sharci fasaxa ilmaha lagu dhalo
Shil tareen oo dad badan ku dilay Hindiya
Todobaadyo kadib dhacdadaas, 3 dhalinyaro ah ayuu tareen jiiray xili ay sawiro ku galayeen qadka tareenka.
Wiilka lagu magacaabo Sharad Gowda oo kuleej ka dhigta halkaas ayaa yiri "Subixii markaan halkan marayay cidna ma aysan joogin, balse markii aan nus saac kadib soo laabtay waxaa joogay illaa boqol qof oo kusoo xoomay si ay u arkaan dadka uu tareenka jiiray, dadka qaarkood ayaa ii sheegay in dhalinyarada sawirka galaysay ay jiifteen xadiidka uu ku ordo tareenka, sidaas darteedna ay arki waayeen in tareenka uu soo socdo iyo in kale".
Labadan dhacdo ayaa walwal ku abuurtay maamulka Karnataka, waxaana hadda dadka da'da yar looga diyaraa in meelaha halista ah aysan sawirada ku galin.
Wasiirka dalxiiska gobolka Priyank Kharge ayaa BBC-da u sheegtay in ay ku mashquulsanyihiin in ay suraan astaamo oranaha "sawirka waa halis, naftaada ayuu goyn karaa".
Lahaanshaha sawirka BANGALORE PHOTO AGENCY
Image caption Qof ku quusay wabi
Hindiya waxa ay leedahay 1.1 bilyan oo qof oo isticmaala taleefoonada gacanta, 300 milyan ka mid ah ayaa isticmaala taleefoonada casriga ah.
Khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in dhalinyarada aadka u jecel baraha bulshada ay sameeyaan dhaqamo xadka ka baxsan si ay sawiro isaga qaadaan, iyaga oo naftooda halis galinaya.
Sida lagu sheegay cilmi-baaris ay si wada jir ah u sameeyeen jaamacadda Carnegie Mellon iyo mac-hadka Indraprastha ee Dehli , Hindiya waxa ka dhacay dhimashadii ugu badneyd adduunka oo la xiriirta sawiradda taleefoonada lagu galo ee halista ah.
Dadkan ayaa dhintay iyaga oo sawir iska qaadaya, waxaana jiiray tareen, qaarkood ayaa meelo dhaadheer kasoo dhacay, kuwa ayaa biyo ku haftay, qaarkoodna daadad ayaaba qaaday.
Bishii June booliiska magaalada waqooyiga ku taala Moradabad ayaa ku hanjabay in ay xabsiga dhigi doonaan dadka sawirrada isaga qaada qadadka tareenada iyo meelaha kale ee halista ah.
Image caption Dhalinyarada geeriyootay
Balse wasiirka Mr Kharge waxa uu sheegay in ay adagtahay in la calaamadiyo meelaha sawirka mamnuuca ka ah "sababtoo ah meel kasta ayay masiibada ka dhici kartaa" ayuu yiri.